Kal fadhiga Baarlamanka Hir-Shabelle oo uu ka qeebgali doono Gudoomiye Jawaari -
Waxaa Galabta Magaalada Jowhar gaaray Gudoomiyaha Baarlamanka Maamulka Hir-Shabelle Cusmaan Barre Maxamed iyo qaar ka mid ah xubnaha Baarlamanka Maamulkaas oo ka anbabaxay Muqdisho.
Kulanka Baarlamanka Hir Shabelle ayaa Maalinta Beri ah lagu wadaa in uu kafurmo Magaalada Jowhar,waxaana furi doona Madaxweyne ku xigeenka Maamulkaas Cali Xuseen Guudlaawe iyo Gudoomiyaha Baarlamanka Federaalka Soomaaliya Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari sida Aan ka soo xiganay qaar ka mid ah Xubnaha Baarlamanka Hir Shabelle.
Gudoomiye Jawaari waxaa horay uraaci doona qaar ka mid ah Xubnaha Baarlamanka labada Aqal ee Soomaaliya kana soo jeeda Gobolada Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan.
Xubnaha lahubo in safarkaas ay ku weheliyaan Jawaari waxaa ka mid ah Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Gudoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxaa uu ka qeeb galidoonaa dhamaan kulumada Baarlamanada Maamul Goboleedyada Shanta ah ee Hoos yimaada Dowladda Federaalka Soomaaliya sidii lagu soo balamay Shirkii Baydhabo ee daba yaaqadii Sanadkii dhamaaday ay ku yeesheen halkaas Hogaamiyaasha Baarlamanada Maamul Goboleedyada iyo kan Dowladda Soomaaliya.
Related Items:Featured, Ka fadhiga Baarlamanka Hir-Shabelle oo uu ka qeebgali doono Gudoomiye Jawaari
Biixi iyo Geele oo wax yaabo badan isla meel dhigay